Klopp oo ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan in Coutinho uu ku laabanayo kooxda Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 19 Jan 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, ayaa beeniyay wararka xanta ah ee sheegay in xidiga reer Brazil ee Philippe Coutinho uu markale ku laaban doono garoonka Anfield.
waxaa jira warar badan ee ku saabsan mustaqbalka ciyaaryahanka reer Brazil, oo aan haatan ku faraxsaneyn qaabka uu kaga sugan yahay kooxda Barcelona.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Liverpool Echo” macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu ka hadlay wararka ku aadan in Coutinho uu dib markale ugu soo laabanayo kooxda Liverpool, wuxuuna u arkaa in xaalada uu Coutinho kaga sugan yahay Barcelona ay tahay mid aad u fiican.
“Tani waa wax aanan dooneynin inaan ka hadlo, ma dhihi karo waa la iibin karaa, ama ciyaaryahanka dib ayuu inoogu soo laabanayaa, wax walba ee aan sheego waxay furi doonaan sheekooyin badan, mana jirto wax sheeko ah”.
“Philippe Coutinho waa xidig ka tirsan kooxda Barcelona, sida aan ka war qabo wuxuu ku noolyahay xaalad wanaagsan, wax walba ee dhankiisa ah aad ayay u fiican yihiin”.